Mịnịsta njem njem nke Uganda jigidere n'ime ụlọ ọrụ ọhụrụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Mịnịsta njem njem nke Uganda jigidere n'ime ụlọ ọrụ ọhụrụ
Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Minister of Tourism na Uganda
A kachiri Tom Butime dị ka Mịnịsta njem nlegharị anya na Uganda n'ụlọ omebe iwu ọhụrụ a mgbe ọ followingụsịrị iyi Onye isi ala Yoweri T. K Museveni na Mee 12, 2021.
Onye isi ala Uganda mechara gụọ ndị Minista Minista ya na-atụ anya ogologo oge ka ha na-ejigide Colonel (ezumike nká) Tom Butime dị ka Mịnịsta nke njem, anụ ọhịa na ihe ochie (MTWA).
Butime ga-eje ozi afọ 5 site na 2021-2026.
Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na-elekọta ngalaba ndị njem kemgbe 2019 site na nsogbu ya kacha sie ike kemgbe mmalite nke ọrịa COVID-19.
Agbanyeghị, onye nnọchi anya gọọmentị batara ọhụrụ Bahinduka Mugarra nọchiri anya onye Mịnịsta Steeti nọ na-eje ozi ogologo oge maka District Ntoroko.
A họpụtara ụmụ nwanyị ka ọ bụrụ ọkwa dị mkpa gụnyere Major (lara ezumike nká) Jesica Alupo dị ka onye osote onye isi ala, onye bụbu Mịnịsta na-ahụ maka ahụike Robinah Nabanja dị ka onye isi ala na onye isi gọọmentị, na onye bụbu Onye isi nzuko omeiwu Hon. Rebecca Alitwala Kadaga dị ka onye osote onye Mịnịsta Ala na Mịnịsta na-ahụ maka Okwu Ọwụwa Anyanwụ Africa.
Butime onye bụ Minista njem nleta kemgbe afọ 2019 na-elekọta ngalaba ndị njem na ihe ịma aka ya kemgbe mmalite nke oria ojoo COVID-19 na nkwụsị na-esote na 2020 na ego ndị njem na-agbadata site na 73 pasent site na US $ 1.6 ijeri na US $ 0.5 ijeri na ndị nleta site na 69.3 pasent site na 1,542,620 ruo 473,085 na ọrụ site na 70 pasent site na ọrụ 536,600 ruo 160,980.
Iji weghachite mpaghara site na ICU, (Intensive Care Unit), gọọmentị mere ihe ndị a na oke ọrịa a.